XOG CUSUB: Villa Somalia oo ku Hanjabtay inay Xiriirka u jareyso Hay’ado kasoo horjeestay | Hobyo Media Online
XOG CUSUB: Villa Somalia oo ku Hanjabtay inay Xiriirka u jareyso Hay’ado kasoo horjeestay
Feb 3, 2019 - jawaab
Warar hoose oo ay heleyso Wakaalada hobyomedia.com ayaa sheegaya in Hay’addaha caalamiga ee ka howlgala Soomaaliya ay qaarkood ka biyo diidan yihiin qorshe Dowlada Soomaaliya ay usoo bandhigtay, iyadoo Villa Somalia ay ku wargelisay inay kala doortaan inay xiriirka u jarto ama ay ku shaqeeyaan rabitaanka Dowlada.
Wasiirka Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Jamaal ayaa mar sii horeysay soo saaray Go’aan ay Xukuumadda Soomaaliya kaga dalbaneyso Hay’addaha Qaramada Midoobay iyo kuwa kale ee Caalamiga ah in ay xarumo ay ku shaqeeyaan ka furtaan Magaalada Muqdisho halka ay degan yihiin Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya.
Xiisad arrintan ka dhalatay ayaa u dhaxeysa Hay’addaha iyo Dowlada dhexe, waxaana qaarkood ay sheegeen inay joojinayaan shaqooyinkii ay Soomaaliya ka wadeen.
Hay’addahan Caalamiga ah ayaa ku doodaya in Dowlada Soomaaliya aysan ku filneyn amniga Masuuliyiinteeda iyo Shaqaalaheeda sidaa darteed aysan dagi karin Muqdisho, halka Dowlada Soomaaliya ay sheegtay inay ka qeyb qaadaneyso Horumarka Dalka hadii Hay’addaha Caalamiga ah ay ka howlgalaan Soomaaliya.
Dowladii KMG aheyd uu Madaxweynaha ka ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed isla markaana uu Ra’iisul wasaaraha ka ahaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa Hay’addaha Caalamka ku amartay inay dalka ka howlgalaan oo xarumo ka sameystaan waxaana arrintaasi ay sababtay inuu ugu dambeyn Ra’iisul wasaare Farmaajo xilka ku waayo.